यात्रा स्रोतहरू: पुस्तक होटलहरू, उडानहरूको लागि खोजी, भाडा कारहरू, ...
यी एक यात्रा को योजना बनाउँदै र तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ? त्यसोभए यो वेबसाईट ठ्याक्कै तपाईले खोज्नु भएको कुरा हो। खुल्ला absolutviajes.com हामीसँग संसारमा मुख्य पर्यटन गन्तव्यहरूको बारेमा सबै राम्रा जानकारीहरू छन्। हरेक दिन हामीसँग लेख प्रकाशित गर्दछौं यात्राको लागि सल्लाहहरू, गन्तव्यहरू जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न, उत्तम समुद्र तटहरू, सबैभन्दा अविश्वसनीय प्रकृति, उत्तम ग्यास्ट्रोनोमी र अधिक।
के हामी तपाइँको यात्राको लागि मद्दत गर्न सक्छौं?
साथै यदि तपाइँ सुरक्षित यात्राको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई होटल बुक गर्न मद्दत चाहिन्छ, उडानहरू खोज्दै, भाडा कार भाँडामा लिदै, ... र यी सबै उत्तम संभव मूल्यमा र सबै बजार ग्यारेन्टीहरूको साथ। के हुन्छ भने? ठिक छ, यहाँ हामी तपाईंलाई पनि मद्दत गर्न सक्दछौं। सस्तो मूल्य प्राप्त गर्नका लागि निम्नलिखित खोज इञ्जिनहरू प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको छुट्टिहरूको मजा लिने चिन्ता मात्र राख्नुहोस्।
यहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ उत्तम सम्भव होटल प्रस्ताव। केही मिनेटमा र सबै ग्यारेन्टीहरूको साथ राम्रा अवस्थाहरूमा तपाईंको होटल खोज्नुहोस् र बुक गर्नुहोस्।
मुख्य पोइन्ट्समध्ये एउटा होटेलमा बस्न र छुट्टीको दिनहरूमा आराम पाउन। यसका लागि सबैभन्दा उत्तम छनौटको जस्तो कुनै कुरा छैन सस्ते होटल त्यो विश्व भर मा उपलब्ध छ। यद्यपि तपाईलाई लाग्छ कि यो एक जटिल काम हुन सक्छ, यो होटल खोज इञ्जिनसँग गाह्रो हुने छैन। यस तरिकाले, हामीले केवल त्यस ठाउँको बारेमा सोच्न सक्दछौं जहाँ हामी केही दिनको लागि हराउन चाहन्छौं।
एकचोटि हामीले यो स्पष्ट गरेपछि, हामी यसलाई खोजी बारमा लेख्छौं। उसको पछाडि, बाँकी सबै कुरा हामीले दिन र महिनामा निर्णय गर्नुपर्दछ कि हामी आराम गर्न खर्च गरिरहेका छौं। यो गर्नका लागि तपाई क्यालेन्डर कसरी प्रदर्शन हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, दिनहरू छनौट गर्न अझ सजिलो हुनेछ। अन्तमा तपाईसँग व्यक्तिहरूको संख्या छनौट गर्न विकल्प हुन्छ।
भरिए पछि, तिनीहरू देखा पर्ने छन् सबै भन्दा राम्रो प्रस्ताव र प्रचार छनौट क्षेत्रमा होटलहरूको। थप रूपमा, तपाई विकल्पहरू सबै समावेशी होटेलहरू वा केवल तपाईंसँग बिहानको खाजा प्रदान गर्न को लागी आकर्षक रूपमा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईंले भर्खर जाँच गर्नुपर्नेछ कि यो तपाईंको रुचिमा छ कि छैन र यी विविध विकल्पहरू बीच छनौट गर्नुहोस्। पक्कै पनि ती सबै तपाईंको रुचि अनुसार हुनेछ!
तपाईं यात्रा जहाँ यात्रा हामीसँग तपाईंको लागि उडान उत्तम मूल्यमा छ। हाम्रो खोज इञ्जिन प्रयोग गर्नुहोस् र पूरा ग्यारेन्टी र धेरै सस्तोको साथ तपाईंको उडान पाउनुहोस्।
रम्बोको साथ उडानहरू खोज्नुहोस्
EDreams को साथ उडानहरू खोज्नुहोस्
स्काईस्केनरको साथ उडानहरू खोज्नुहोस्
एट्रापालोको साथ उडानहरू खोज्नुहोस्
लिलिगोको साथ उडानहरू खोज्नुहोस्
लास्टमिनेटको साथ उडानहरू खोज्नुहोस्
यदि हामीले हामीले पहिले नै भ्रमण गर्ने क्षेत्र रोजेका छौं र होटल जहाँ हामी बस्न सक्दछौं, हामीले उडानहरूको उपलब्धता जाँच गर्नुपर्नेछ। हामीले तपाईंलाई भर्खरै मात्र व्याख्या गरेका थियौं भन्दा तपाईंलाई अरू धेरै जटिलता आवश्यक पर्दैन। उही पृष्ठमा, तपाईले खोज ईन्जिन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सस्तो उडानहरू। एक उपकरणसँग सबै चीजहरू छन् महान लाभहरू चयन गर्न र तिनीहरूलाई उपलब्ध गराउन।
त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले सोच्छन् कि उडानमा हामीले बजेटको ठूलो हिस्सा गुमाउँछौं। हामी सबैसँग ठूलो छुट्टी बजेट नभएकोले हामीले थोरै निचो पार्नु पर्छ। अवश्य पनि, एक राम्रो खोज इञ्जिनलाई धन्यवाद, तपाईं तपाईंको लागि उडान सौदाहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सब भन्दा राम्रा मूल्यहरू र उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरू देखा पर्नेछन्। उही तरीकामा, मूल पनि संकेत गरीन्छ, साथै गन्तव्य र उही अवधि को समय। तसर्थ, यदि यसको मापन छ भने, यो पनि स्पष्ट संकेत हुनेछ। एकचोटि तपाईले खोजी ईन्जिनमा अनुरोध गरिएका फिल्डहरू भर्नुभयो, तपाईंसँग सबै ग्यारेन्टीहरू हुन्छन् र तपाईको नक्कल मूल्यको नतीजामा।
पत्ता लगाउनुहोस् भाँडा कार जो तपाईको आवश्यकता अनुसार उत्तम सूट गर्दछ तपाईंको गन्तव्य शहर मा। हामीसँग सबैभन्दा ठूलो प्रस्ताव छ भाडा कारहरु सबै दुनिया मा र सबै भन्दा राम्रो मूल्यहरु बाट।
यदि तपाईं आफ्नो कार लिन चाहनुहुन्न, तर सम्पूर्ण गन्तव्यको साथ तपाईंको गन्तव्यमा जान चाहानुहुन्छ भने, तपाईं भाडाका कारहरूका लागि पनि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिमा सोध्नुपर्दा जोगिन र जब तपाईं अवतरण गर्नुहोस् यो सही हुनको लागि, भाडा कार खोजी इञ्जिनलाई नबिर्सनुहोस्।
यसमा तपाईं आरामपूर्वक सबै ठूला कम्पनीहरूमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, जब तपाईं अनलाइन बुक गर्नुहुन्छ, तपाईं ठूलो छुटबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। केहि कहिल्यै दुख्छ। अवश्य पनि, भाडा कार बुकिंगको अर्को फाइदा यो हो कि तपाईं आफ्नो आरक्षण व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। यो यो हो कि तपाइँ यसलाई परिमार्जन गर्न वा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।
सुझाव जब कार भाँडामा लिईन्छ
एक धेरै साधारण चरण हुनुको अलावा, खोज इञ्जिन मार्फत, तपाईंले त्यो जान्नुपर्दछ प्रत्येक कारको मूल्य छ। यो तपाइँको पहुँच हुने प्रत्येक पृष्ठमा पूर्ण रूपमा वर्णन गरिनेछ। यो सँधै कारको प्रकारमा निर्भर हुन्छ र कहिलेकाँही जहाँ हामी यसलाई भाँडामा लिन्छौं। यसैले रेनोलो क्लियो वा Citroen C1 वा C4 केही सस्तो विकल्पहरू छन्। अवश्य पनि, हामीले तपाईलाई भनेको छ, तपाईले जहिले पनि प्रत्येक वेबसाइटमा जाँच गर्नु पर्छ र सर्तहरू राम्रोसँग पढ्नु पर्छ।
बुक गर्नुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ अग्रिम मा। हामी राम्रोसँग जान्दछौं कि उच्च मौसम मितिहरूले जहिले पनि मूल्यहरू अधिक महँगो पार्दछ। केही कम्पनीहरूले ड्राइभर २ 25 बर्ष भन्दा कम उमेरको हुनु हुँदैन, तर केही सर्चार्जहरू थप्न सकिन्छ। याद गर्नुहोस् कि तपाईंले जहिलेसुकै ग्यास ट्या tank्क छोड्नुपर्नेछ जस्तो हामीले फेला पारेका छौं। त्यसकारण, जहाँ सम्भव छ, हामी एक नीति / छनौट गर्नेछौं पूर्ण / पूरा ट्या tank्कमा आधारित छ। यस तरिकाले हामी आश्चर्यहरूबाट टाढा रहनेछौं र हामी पेट्रोल भर्न सक्षम हुनेछौं जहाँ यो उपयुक्त छ, जब सम्म हामी यसलाई पूर्ण छोड्दैनौं।
यात्रा बीमा लिनुहोस्
यदि तपाइँ विदेशमा यात्रा लिन जाँदै हुनुहुन्छ र तपाइँ कुनै पनि प्रकारको समस्याबाट बच्न चाहानुहुन्छ भने उत्तम बिचार भनेको यात्रा बीमा लिनु हो। हाम्रो प्रदायक IATI बीमा तपाईंको आवश्यकता अनुरूप यात्रा बीमाको फराकिलो दायरा प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, हाम्रो वेबसाइट मार्फत तपाईंको बीमा करार गरेर तपाईं मानक दरहरूको सन्दर्भमा%% छुट पाउनुहुनेछ।
बीमा सम्झौता गर्न को प्रक्रिया धेरै सरल छ, तपाईं बस गर्न पर्छ:
प्रविष्ट गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेर बीमाकर्ताको वेबसाइट.
तपाईंको निवास स्थान, तपाईं यात्रा गर्न गइरहेको गन्तव्य र मितिहरूमा सूचित गर्नुहोस्
बटनमा क्लिक गर्नुहोस् budget बजेट गणना गर्नुहोस् »र तपाईंले सक्नुभयो
यस बिन्दुमा उपकरणले तपाईंलाई उत्पादनहरूको सम्पूर्ण सूची प्रदान गर्दछ जुन यो तपाईंको यात्राको लागि उत्तम मूल्यहरूमा उपलब्ध छ। एउटालाई छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईको आवश्यकतालाई सबै भन्दा राम्रो गर्दछ र तपाईको विवरण भर्नुहोस् यसलाई भाँडामा लिनुहोस् र तपाईले पहिले नै आफ्नो बीमा राख्नुहुन्छ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको यात्रा बीमा book% छुटमा बुक गर्न
गन्तव्यहरू जुन प्रत्येक वर्ष अधिक पर्यटक होस्ट गर्दछ
पर्यटकहरु को लागी एक सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य फ्रान्स हो। यो भित्र छ पहिलो स्थानएक प्रकाशित अध्ययन अनुसार। यसमा यो टिप्पणी गरिएको छ कि करीव million 85 करोड मानिसहरूले यस ठाउँको लागि रोजेका छन् र अवश्य पनि, यो भन्नु पर्छ कि यो कमको लागि होइन। फ्रान्सका धेरै आकर्षणहरू छन्। पर्यटकहरू एकै देखिने स्टपहरूको रूपमा एफिल टावर छनौट गर्दछन्। कोहीले यसलाई चढाई हिम्मत गर्छन्, जबकि अरूले यसलाई बाहिरबाट र विशेष गरी सूर्यास्तमा मनन गर्छन्।
लामो लाइनहरूको बावजुद, लुभ्रे पनि एक अत्यावश्यक छ। केहि कुरा हामीले नोट्रे डेम क्याथेड्रलको बारेमा पनि भन्नुपर्दछ। न त हामीले एउटा एकदमै रोमान्टिक ठाउँहरूमा जान बिर्सनु हुँदैन, यद्यपि यस क्षेत्रमा प्रत्येक र सबैसँग यी ब्रश स्ट्रोकहरू छन्। मोन्ट सेन्ट मिशेल, एक चर्चको साथ एक संलग्नक हो जुन यसको वास्तविक सौन्दर्यतामा ध्यान दिनको लागि हेर्नुपर्दछ। आर्क डे ट्राइम्फ, सेक्रेड हार्टको बेसिलिका र त्यसैले म साइटहरू सूचीबद्ध गर्न सक्दछु जुन तपाईले देख्नु पर्दछ, कम्तिमा तपाईको जीवनमा एक पटक।
सब भन्दा पर्यटकहरु संग अर्को ठाउँ, र त्यो फ्रान्स पछि स्थित छ, संयुक्त राज्य अमेरिका हो। तिनीहरू भित्र, अरु भन्दा पनि बढी भीड क्षेत्रहरु छन्। हो, पर्यटक धेरै स्पष्ट छ।
टाइम्स स्क्वायर: न्यू योर्कमा अवस्थित प्रख्यात वर्गले देख्छ हरेक वर्ष million करोड भन्दा बढी पर्यटकहरू बित्छन्। केवल यसको महान दृश्य पूर्ण रोशनीको साथ, यसले यसलाई अनिवार्य स्टप बनाउँदछ।
सेन्ट्रल पार्क: म्यानहट्टनको मुटुमा, हामी यो ठूलो पार्क भेट्टाउँछौं, जुन हामीले धेरै चलचित्रहरूमा पनि देख्यौं। यसको सुन्दरता र विशालता हेर्न हरेक वर्ष 35 XNUMX करोड पर्यटकहरू आउँदछन्।
लास भेगास: कसले लास भेगासमा विवाह गर्ने सपना देखेको छैन? कुनै श doubt्का बिना, सबैभन्दा धेरै प्रशंसित गन्तव्यहरू। यस उद्देश्यका लागि मात्र होईन, तर क्यासिनो, जादुई खेलहरू वा ग्रान्ड क्यानियन भ्रमण गर्न सक्षम भएको लागि।
बोस्टन: यो शहर हो जुनसँग ठूलो सांस्कृतिक विरासत छ। थप रूपमा, हामी चीयर्स रेस्टुरेन्ट र यसको महान ग्यास्ट्रोनोमिक प्रस्ताव बिर्सदैनौं।
स्यान फ्रांसिस्को: संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहरहरू। योसँग उपलब्ध सबै कुरामा यसको ठूलो पहुँच छ, किनकि हामीलाई चाहिने सबै कुरा हेर्न हामी टाढा टाढा यात्रा गर्नुपर्दैन।
लस एन्जलस: हामी लस एन्जलस बिर्सन सक्दैनौं। हिमाल, पर्यटक आकर्षण र विलासिता यो exd जरूरी छ।
स्पेन भित्र छ ती मध्ये पर्यटकले भ्रमण गरेको तेस्रो स्थान। यस भित्र, हामीसँग सबै स्वादको लागि गन्तव्यहरू छन्। हुनसक्छ, पर्यटकहरूले कार्दोबाको मस्जिद, ग्रानानाको अल्हाम्ब्रा र बार्सिलोनाको ला सगरडा फिमिलियालाई रोजेका छन् जुन सबै पूर्वानुमानहरू माथि छ। सेभिल र यसका रिलस अल्जाजारेहरू पनि गहन भ्रमणको लागि पछाडि छैनन्। उत्तर तर्फ, स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेलाको क्याथेड्रल तीर्थयात्री र कला प्रेमीहरूको लागि मिलन स्थल हो। सेगोवियाको एक्डेक्टक्ट वा बुर्गोसको क्याथेड्रल बढी पर्यटन स्थलहरू मानिन्छ।